Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari o o ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari o o ka dhacay Muqdisho
Ugu yaraan shan qof oo ku dhimatay qarax gaari o o ka dhacay Muqdisho. [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan shan qof ayaa ku dhimatay qarax gaari oo ka dhacay gudaha Muqdisho galabta oo Talaado ah, sida il-wareedyo dhanka amaanaka iyo caafimaadka katirsan ay sheegeen.
Qaraxa oo ahaa gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa lagu bartilmaameedsaday bar-kantarool ciidan oo ku dhow xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya, sida ilo-wareedyadu sheegeen.
Qaraxa ayaa sidoo kale waxaa ka dhashay tiro dhaawac ah, sida saraakii caafimaad oo ku sugan gudaha Muqdisho ay khadka taleefoonka ugu sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada qaraxa ilaa iyo hadda, balse ururka hubaysan ee Al-Shabaab ayaa weeraro kan lamid ah ka geystay gudaha Muqdisho xilliyadii lasoo dhaafay.
Qaraxa maanta oo Talaado ah dhacay ayaa imaanaya saacado yar kadib markii Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku dhawaaqay golihiisa wasiiradda.
February 16, 2017 Ugu yaraan shan madfac oo ku dhacay banaanka hore ee xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo madaxweynaha cusub uu xafiiska la wareegay
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s National Intelligence and Security Agency (NISA) have detained nearly nine people in connection with a car-bomb attack in the Somali capital Mogadishu, state-run Sonna news agency reported. At least three UN Somali [...]